Faah faahin:- Dagaal culus oo ciidanka Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna ku dhex maray deegaanka Godinlabe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo ciidanka Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna ku dhex maray deegaanka Godinlabe
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal aad u culus oo maanta deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud ku dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulka Ahlu-sunna Waljameeca, halkaas oo ugu dambeyn ay gacan ku heynteeda la wareegeen kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
La-wareegitaanka deegaanka Godinlabe ee maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii uu dagaal culus dhex-maray ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay markiisii hore ku bilawday weerar ay ciidanka nabad-sugidda ee maamulka Galmudug ku qaadeen koox maleeyshiyo ah oo isbaaro dhigatay deegaanka Godinlabe, waxaana markii dambe dagaalkaasi kusoo biiray ciidanka maamulka Ahlu-sunna Waljameeca.
Ciidanka Ahlu-sunna oo garabsanaya kooxihii isbaarada dhigatay deegaanka Godiblabe ayaa dagaal culus la galay ciidanka maamulka Galmudug, waxaana ugu dambeyn deegaankaas laga saaray ciidankii Galmudug oo u cararay dhinaca magaalada Cadaado.
Dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sida la sheegay ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tiradda uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay.
Dhinaca kale, gacan ku haynta deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud ayaa haatan waxaa la wareegay ciidanka maamulka Ahlu-sunna Waljameeca iyo kooxihii isbaarada u taalay deegaankaas.
Sidoo kale, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlusunna oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Godinlabe ay nolosha ku qabteen ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug iyo sidoo kale hub aad u badan.
Ugu dambeyntii, ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka Galmudug, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalka maanta ciidankooda iyo kuwa Ahlusunna Waljameeca ku dhex maray deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay ugu dambeyn la wareegeen kuwa Ahlu-sunna.